The kacha ọhụrụ na Sex Tech - News Ọchịchị
The kacha ọhụrụ na Sex Tech
Ị nwere ike ịchịkwa ihe niile si gị kpo oku gị usoro mmega na na ngwa, Ya mere, gịnị Bluetooth gị mmekọahụ ndụ?
Isiokwu a na-akpọ “Ihe maka izu ụka, sir? The ọhụrụ na mmekọahụ tech” e dere site Robina Gibb, n'ihi na theguardian.com on Saturday 23 January 2016 13.37 UTC
Taa entrepreneurial ọgbọ pụrụ ịbụ na i mepụtakwara mmekọahụ, ma ha mepụtakwara Bluetooth ejikọrọ mmekọahụ ji egwuri egwu.
Robina Gibb scoured Los Angeles si mmekọahụ Health Expo na January, ịgagharị ụfọdụ nke ahịa si kasị ọhụrụ na-akpachi anya na ngwaọrụ, si na kọmputa stimulators maka di na nwunye aka smartphone na-achịkwa pelvic n'ala exercisers.
The Piu imetọ onwe egwuregwu ụmụaka
The More ọjọọ vibrator. Foto: Emily Berl maka Guardian
Mere site IMTOY, a nkecha madu vibrator nwere a onwunwu nwa na-acha uhie uhie mputa na a squidgy red silicone n'ime ime. Penises a ga-emeso ka a oke nke 30 vibration nakawa etu esi enyere site na atọ dị iche iche Motors na-e-enye "a nwayọọ urukurubụba flutter ma ọ bụ a nnukwu thump", gemäß ka ahịa director Matthew Abo. The Piu akwụ ụgwọ $199, na syncs na ngwa na akanyam a nhọrọ nke okenye fim ndị e mere na-egwu na oge na-eji ngwa ahụ. Ekesịpde a Chinese ike dabere na Shenzen, na Piu na-touted dị kasị dara oké ọnụ na ọkaibe nwoke vibrator.
The Nova vibrator. Foto: Emily Berl maka Guardian
Tori Parker, director nke ahịa mmepe na Anyị-vibe, egosi anya ụlọ ọrụ ọhụrụ Nova vibrator. A mgbanwe, abụọ-pronged vibrator, ọ na-arụ ọrụ na Anyị-Control ngwa na-enye ohere a onye aka ịchịkwa ngwaọrụ remotely. Nke a bụ mara, na agadi mmekọahụ-tech parlance, dị ka "teledildonics". Nke a mmaji nke ọkaibe n'ime obodo mmekọahụ play pụrụ ịbụ nke gị maka gburugburu $150.
Anyị-vibe si di na nwunye vibrator
The Anyị-vibe uloanumaanu. Foto: Emily Berl maka Guardian
The Anyị-vibe 4 Plus-abịa na Anyị-Jikọọ ngwa, na bụ ọhụrụ smart version nke ihe azọrọ na-ahụ n'ụwa si n'elu n'ire "wearable" di na nwunye vibrator. Arụpụtara site Canadian ike Standard innovations, na curved, ergonomic imewe anya ihe dị ka a uru roba staple egbe na e mere na-na-eyi nwaanyị n'oge mmekọahụ. Dị ka Nova, na Anyị-vibe 4 A pụrụ ịchịkwa remotely site na ngwa, ezie na ụlọ ọrụ na-aka nke na-egosi na "snug kwesịrị ekwesị" na "ntakwu-jụụ Motors"-eme ka ọ na ezigbo maka a solo, nwekwara uche panty vibe. Ọ na-mere nke silky, ọgwụ ọkwa silicone, -abịa na pink, odo odo na agba ntụ na akanyam maka $179.
Mmadụ Bịa ka California: dildos mere nke crystal
Crystal dildos. Foto: Emily Berl maka Guardian
Ọ bụrụ na internet ejikọrọ mmalite abụchaghị nke gị ihe, i nwere ike na-ahọrọ a jizi nwayọọ egbu maramara wand ma ọ bụ egg mere nke dị ọcha crystal. Chakrubs nchoputa Vanessa Cuccia malitere ụlọ ọrụ ya na-eme ka ndị na-agwọ ike nke crystal, ma ọ bụ nkume anwansi, ka n'ógbè nke mmekọahụ. Nhọrọ na-agụnye Indian jed, acha ọcha Lotus na obsidian nke, ụlọ ọrụ na-azọrọ, ga-ewepụ ndị ọrụ nke ọ bụla na-adịghị mma ume ha AURA, na n'ebe ọ bụla ọzọ ha na-arapara ya. Ahịa mbio $75 ka $200.
Swiiti - na electric monitor maka kegels
The swiiti kegel exerciser. Foto: Emily Berl maka Guardian
The swiiti bụ ihe ọzọ IMTOY "onye ọzụzụ" n'ihi na ndị inyom na-enyere ike pelvic n'ala uru. Kegel exercisers bụ a booming ngalaba ulo oru a "smart" obere 33mm diameter bọl on a akaghị bụ otu n'ime cutest. Ime ihiere-pink na mere nke ọgwụ ọkwa silicone, ya esịtidem mgbali ihe mmetụta nakọtara "erughị ala data" si mkpi-ntọhapụ mmegharị nke pelvic n'ala uru ahụ na agwa via Bluetooth na swiiti smartphone ngwa, na a mgbali ọnụ ọgụgụ na ọnụ ọnụ na 225. The ngwa nwere a usoro nke "arụsi" na ụda olu nke a motivational mgbatị nkụzi. Packaged dị ka ihe dị oké ọnụ karama manu-otite, ọ na-abịa na a sleek na-acha ọcha nchekwa ikpe na-agụnye ihe ultraviolet transmitter maka nwoke ịga ụlọ ọgwụ. Kere site Chinese injinia ndị na-asị na ha yiri ala 40dB ambient olu a n'ọbá akwụkwọ ya obere moto, na swiiti-akwụ ụgwọ $189.
The inseminating dildo ị na a na-achọ
The Semenette POP ngwaọrụ. Foto: Emily Berl maka Guardian
The Pop bụ ọhụrụ version nke revolutionary Semenette, a mmekọahụ egwuregwu ụmụaka na okpukpu abụọ dị ka ihe inseminating ngwaọrụ na mimics ejaculation. Mmewe Stephanie Berman na-emeghị atụrụ ime na ya na onye òtù ọlụlụ na-eji "toki baster" usoro na chọrọ ike a egwuregwu ụmụaka na bụ ma na-atọ ụtọ, ọtọ na-eche dị ka a ọgwụ na enyemaka. Mgbe Berman bụ nwunye ya wee tụrụ ime nke mbụ ha na-eji ya, ọ nwetara ego na patented ngwaahịa mbughari na replaceable tubing. Ọ na-abịa na a dịgasị iche iche nke agba, nwere a eriri-on nhọrọ na retails maka $139.95 gụnyere atọ kemwepu akpa.
Ndien ke akpatre…
Edgeplay si whips. Foto: Emily Berl maka Guardian
Edgeplay Gear toned ala ha na nhọrọ nke ngwaahịa maka Ọ ihe omume, egosipụta a obi umeala nhọrọ nke na-abụghị internet ejikọrọ velvety paddles na akpụkpọ anụ whips. N'ihi na Mmetụta version of bọl gags, ịdị ọcha ngịga na-echepụta ironmongery, -ahụ Edgeplay Gear website.
33910	0 Nkeji edemede, ọmụmụ nsogbu, Ngwa, Life na style, News, Robina Gibb, mmekọahụ, enwe mmekọahụ ike, Technology, US ozi ọma
← Huawei Ma Ọ Bụ Nwunye 8 Review The Kasị Rewatchable Movies →